Yekushambadzira zano: chii icho, ndeapi aripo uye maitiro ekugadzira imwe | ECommerce nhau
Kuva neCommerce nhasi hakuna kuoma. Asi kuti ubudirire naye hongu, uye zvakawanda. Naizvozvo, avo vanoisa mari muhurongwa hwekushambadzira vane mukana uri nani wekusvika kune vatengi chaivo, vachiita purofiti nekutanga iro bhizinesi paInternet.
Asi, Ndeipi nzira yekutengesa? Kune akawanda marudzi? Unofanira kuenda sei? Kana iwe uchingozvibvunza iwe iyo yese mibvunzo, uye kunyangwe yakati wandei, inguva yekuti iwe utarise kune iro ruzivo isu ratakatora iwe.
2 Mhando dzemazano
2.1 Inbound yekushambadzira zano
2.3 Kushambadzira munharaunda
2.4 Email kushambadzira, iyo email yekushambadzira zano
3 Maitiro ekuvandudza nzira yekutengesa
Unogona kutsanangura zano rekushambadzira se iwo matanho ayo kambani inofanirwa kutora kuitira kuti iwedzere kutengesa uye mufananidzo wechiratidzo zvine chekuita nemakwikwi.
Izvozvi, nekudaro, maitiro ekunyora script iyo, zvichibva pane zviwanikwa zviripo kukambani, zvese zvemari uye zvinhu, zvinogona kusimbisa nhevedzano yezviito. Izvi zvinofanirwa kuve nechinangwa chekuwedzera kutengesa kwezvigadzirwa zvavanazvo, kana kuti zviite kuti zvinyatso zivikanwa nevashandisi nevanhu vanofarira izvo zvavanazvo.
Chero nzira yekutengesa Iyo inoumbwa zvichibva pazvinangwa zvishanu zviri zvinotevera:
Chaicho: ndeaanoreva chimwe chinangwa, chimwe chinhu chaunoda kuzadzikisa
Zvinogona kuyerwa: nekuti iwe unofanirwa kuziva nzira yekuyera zvinozadzikiswa, zvikasadaro zvinonetsa kuti uzive kana iko kubudirira kwacho kwawanikwa kana kwete.
Zvinogoneka: Iwe haugone kuseta zvinangwa zvakaoma kuzadzikisa kana zvisingaite. Iwe unofanirwa kuve wechokwadi nekuti, zvikasadaro, isu tinopedzisira tave neyekushambadzira nzira iyo ichave isingakwanise kuzadzisa.
Zvakakodzera: izvo zvine hukama nekambani uye zvaunoda kuzadzisa. Semuenzaniso, kana chinangwa chako chiri chekutengesa zvimwe zvigadzirwa, haugone kuyera mhedzisiro yezano racho zvichienderana nezvinodiwa zvinowedzerwa nehukama pasocial network.
Nezuva: Iwe unogona kuseta zvipfupi, zvepakati nepakati zverefu zvibodzwa
Kutaura nezvemhando dzemazano kunogona kuve kwakakura kwazvo. Asi panguva imwechete inokupa iwe chiratidzo chekuti iwe unofanirwa kufunga sei gwaro rerudzi urwu zvichibva pachinangwa chikuru chaunoda kuzadzisa. Semuenzaniso, kutarisa kutengesa zvimwe zvigadzirwa muchitoro chako hakuna kufanana nekutsvaga kwakawanda kubatana nevatengi pamasocial network.
Iwo marongero akasiyana uye, kunyangwe zvakadaro, ivo vaizowira mukati meiyo nzira yekutengesa.
Naizvozvo, pano isu tinokusiira iwe unozivikanwa nhasi.
Inbound yekushambadzira zano
Ndiro rinotarisira izvozvo vatengi vanosvika pane iyo mhando. Mienzaniso yeiyi inogona kuve makosi, dzidziso kana zvigadzirwa zvinotsvaga kugadzirisa dambudziko rine vashandisi, uyezve tsanangura maitiro aunogadzirisa.
Iyo ingangove imwe yeakanyanya kuomarara kushandisa, kunyanya sezvo nhasi zvinhu zvese zvakagadzirwa.
Kana izvo zvauri kutsvaga zviri ipa kukosha kune zvirimo muwebhusaiti yako, uye panguva imwechete unatsiridza SEO Kuti Google ikuise pamapeji ekutanga emhedzisiro, saka iyi ndiyo imwe yesarudzo dzakanakisa dzekutengesa nzira.
Izvo zvinovakirwa kwete chete mukumisikidza mazita akanaka uye nekuparadzira mazwi akakosha mavari, asiwo nekupa izvo zvemukati zvinofarira vashandisi, izvo zvinovadzidzisa uye nekuvanzwira tsitsi kusvika padanho rekufarira kwavari.
Una pasocial media-yakavakirwa kushambadzira zano nhasi, nhasi chaicho chakarova. Vanhu vazhinji uye vazhinji vari kujoina network, uye kupi kumwe kwaunogona kuvawana.
Naizvozvo, kuzvipira zviwanikwa uye kuyedza kushambadza eCommerce yako kana peji rako kuburikidza nesarudzo idzi izvozvi kwakakosha kune vakawanda. Ehezve, muzviitiko zvakawanda chinangwa ndechekushambadzira chiratidzo, kwete kutengesa. Nekuti icho chinowanzo kuve chinhu chechipiri; chinonyatso simbiswa chiteshi chekutaurirana nevateveri uye, panguva imwechete, chekubatana navo.
Email kushambadzira, iyo email yekushambadzira zano
Zvakawanda neCommerce zviri kuita iyi mhando yezano asi iwe unofanirwa kuve wakangwarira nekuti vazhinji vanozviona kunge spam, kunyangwe kana vakasaina pachavo.
Zvakare, kutumira email zuva rega rega, kana kunyangwe vhiki rega rega, kunogona kukonzera vazhinji kuzvinyoresa kana panguva dzekutanga shoma vasina kupihwa chero chinhu chinovafadza. Kune izvi iwe unofanirwa kuwedzera kuti iwo haasi "akasarudzika" maemail, kunyangwe izvozvi paine musiyano mukuru maererano nezvinodiwa nemutengi wega wega.
Maitiro ekuvandudza nzira yekutengesa
Isu tave pamwe tasvika pakukosha zvakanyanya kana izvo zvauri kutsvaga iri "zvakajairika" nzira yekutengesa. Imwe neimwe eCommerce ine zvinangwa, zviwanikwa uye nzira dzekuita zvinhu. Izvi zvinoreva kuti kushandisa template kana zano reimwe kambani Kuishandisa kuchitoro chako chepamhepo kana kuchiratidzo chako kungasawana mhedzisiro iwe yaunotarisira.
Naizvozvo, inofanirwa kuongororwa kune imwe kambani kana bhizinesi. Mariri, zvikamu zvakati zvichaunganidzwa, kubva kune zviwanikwa zviripo, zviitiko zvichaitwa, maitiro ekuyera mhedzisiro, mikana yeshanduko zvinoenderana nezvabuda uye izvo zvinofanirwa kuwanikwa.
Kuti uite izvi, matanho acho anotevera:
Gadza zvinangwa zvako. Kubva pane zvatakakuudza kare. Iko hakuna kushoma kana huwandu huwandu, asi kazhinji nzira yekutengesa ndeyegore.
Kutsvaga kwemusika. Izvi zvinowanikwa kuburikidza nekuunganidza zvese zvinogona kuitika nezve musika mauri kuda kushanda. Pamusoro pezvo, pane zvidimbu zviviri zvakakosha: zveavo vangangove vatengi, ndiko kuti, vateereri vauri kunongedza uye vaunoda kuziva; uye yevaikwikwidza, iyo yaunofanira zvakare kuongorora kuti uzive zvavakanakira kukunda uye zvavakaipa, kuti varege kuwira mukukanganisa kumwe chete.
Maitiro ekuzadzisa izvo zvinangwa. Zviitwa, zviito uye mapurojekiti anozoitwa kuzadzisa zvaunoda.
Budget inowanikwa, zvese zvine hupfumi uye zvine hungwaru.
Chinja nzira. Unogona kumisikidza mamwe marongero sehurongwa B kana iwe ukaona kuti anokundikana mawaivimba nawo kuti uite shanduko pabasa uye uwane mhedzisiro.
Uye ndizvozvo. Zvinogona kutaridzika kunge zviri nyore asi chinetso chaicho chemazano ekutengesa ari, pasina mubvunzo, kuzadzisa zvinangwa zvakaiswamo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Marketing strategy